We She Me: သြော်ဇီအကြောင်း GTalk မှာ
Anonymous - 7/10/08, 12:09 AM
I am also waiting my AU PR application result. Thanks for this post.My favourite posts are about ur family & food because it makes warm for abroad peoples:)
Anonymous - 7/10/08, 1:02 PM
In your post, there are more politics in au than sg. May i know what kind of mostly because of beteen native and asian? is it within the acceptable limit? for me i want the peaceful lifestyle and do what i admire on time being.
Andy Myint - 7/12/08, 7:48 PM
Dear Reader(1), glad to know that family and recipe post make you warm. You comment also make us warm :)
စာဖတ်သူ (၂) ကျွန်တော် ကြုံတာတွေပဲ ပြောပါမယ်။ ယေဘုယျ မဟုတ်နိုင်ပါ။ Politics ဆိုတာကတော့ စင်္ကာပူက တရုတ်မတွေလို မနာလို စောင်းမြောင်း အခြောက်တိုက် ဘ၀င်မြင့်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကတော့ Culture မတူတာပါ။ ဘိုတွေက သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ကိုယ့်စည်း သူ့စည်းနဲ့ပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာတာ အားနာတာ မရှိဘူး။ ကိုယ်မှန်ရင် ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ပြီးတော့ Client တွေကို Charge လုပ်တာက သိန်းဂဏန်းကနေ စပြီး Charge လုပ်တာဆိုတော့ အမှားမခံတာတွေ ရှိလို့ ကိုယ်ကိုယ်ကို လုံအောင် နေရတာမျိုးပါ။ နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးတဲ့ Politics လောက် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်မှား ကိုယ်ခံ ဘယ်သူမှ လက်ဝင်မလျှိုတဲ့ Politics ကို ဆိုတာပါ။ သိပ်လည်း ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။
စိုးထက် - Soe Htet ! - 7/13/08, 7:35 PM
min - 2/11/09, 8:20 PM
May I know some of information ,
I would like to stay in Australia,
I am working in Singapore with my wife.
We are Singapore PR and engineers, can we work in there?
Which part of Australia should we apply for PR and stay?
After we got Australia PR,
If we don't get job in Australia, will support the money by Australia Gov.?
If my wife job location and my job location is not same what should we do?
If you possible please give me you contact email,I would like to ask more information.
Andy Myint - 2/12/09, 12:49 PM
Career should be OK for engineers here in AU. Better mechanical or mechatronics. SG PR status doesn’t matter.
It’s up to you. For mechanical engineer, mining industry is booming in west (near Perth) and can getajob more easily.
After we got Australia PR, If we don't get job in Australia, will support the money by Australia Gov.?
No. Not after2or few years but I’m not sure. But you may get family assistance which is not enough forafamily like yours.
I cannot imagine. I’d recommend to take time to find jobs in same location.
Anonymous - 10/14/09, 3:22 PM
မေးတဲ့သူများကလဲ ခက်တော့ခက်နေပြန်ပါပြီ၊ ဒီblog ပိုင်ရှင်က စင်ကာပူမှာလဲ နေဖူးသူဖြစ်မှာပါ၊ အဆိုးအကောင်းယေဘုယျ အားဖြင့်စင်ကာပူက ပိုကောင်းရင် သူ စင်ကာပူမှာပဲနေမှာပေါ့၊ စင်ကာပူကအလုပ်ရှာရတာပိုတောင်လွယ်ဦးမယ်၊ သူလိုလူတစ်ယောက်အတွက်စင်ကာပူပြန်လာချင်ရင်အလွယ်လေးဖြစ်မှာပါ။ အဲ အခုထိ အော်စီ မှာနေနေတာ ကိုကြည့်ရင် politics ပဲများများ အစိုးရကိုအခွန်ဆောင်ရတာပဲများတယ်ပြောပြော အော်စီကသာလို့ပေါ့၊ အော်စီအစိုးရက ကိုအန်ဒီ ရယ် ကျနော်တို့ဆီမှာ နေပေးပါဗျာလို့ တောင်းပန်ရင်တောင် မသာရင်ဘယ်နေပါ့မလဲ..လူသဘောလေ၊ စင်ကာပူမှာနေလို့ရရဲ့သားနဲ့ အော်စီကိုပြောင်းအခြေချနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို အော်စီနဲ့စင်ကာပူ ဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲ မေးစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ သူ့အမြင်နဲ့သူ ဆိုပေမဲ့ မြန်မာမှန်ရင်အမြင်ချင်းကသိပ်မကွာပါဘူး၊ ကောင်းတယ်သာတယ်ဆိုတာ ဘယ်မြန်မာမဆိုကြိုက်ပါတယ်။